ဘားရက် အိုဘားမားရဲ့ ၂၀၁၇ အတွင်းအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များနဲ့ သီချင်းများ - YOYARLAY Digital Media and News
ဘားရက် အိုဘားမားရဲ့ ၂၀၁၇ အတွင်းအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များနဲ့ သီချင်းများ
Published: January 12, 20187:23 am Updated: February 9, 20195:26 pm
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 2: (AFP OUT) U.S. President Barack Obama holds upabook given to him by author Eric Metaxas, who was the keynote speaker at the National Prayer Breakfast February 2, 2012 in Washington, DC. Obama also spoke, defending his economic policies in an echo of his recent State of the Union address. (Photo by Chris Kleponis-Pool/Getty Images)
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုဘားမားက ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း သူဖတ်ပြီးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေထဲကအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေနဲ့ အဲ့ဒီနှစ်အတွင်း သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုသူ့ကရဲ့ official page မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုး၊ သီချင်းမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်ရသလဲသိချင်တဲ့သူများအတွက် ရိုးရာလေးမှ သူဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သူကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေရဲ့ Youtube link လေးတွေ ရှာပြီးထည့်ထားပေးတဲ့အတွက် သူ့အကြိုက်လေးတွေကိုစုံစမ်းကြည့်ကြရအောင်။ သူ့ရဲ့ pageမှာလည်းဒီလိုမျိုးရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ “ကျွန်တော် အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ စာအုပ်စာရင်းများနဲ့ သီချင်းစာရင်းများကို ဝေမျှလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းမှာရှိတဲ့ စာရေးဆရာများနဲ့ အနုပညာရှင်များကိုအားပေးရာရောက်ပြီး ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ကျွန်တော်အချိန်ပိုရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်တွေနဲ့ သီချင်းတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုသီချင်းတွေကနေတစ်ဆင့် စိတ်အားတက်စေတဲ့ သီချင်းစာရင်းတွေကလည်းအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာသင်တို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
၂၀၁၇ မှာ ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေကတော့ ”
-Grant by Ron Chernow
-Evicted: Poverty and Profit in the American City by Matthew Desmond
-Janesville: An American Story by Amy Goldstein
-Exit West by Mohsin Hamid
-Five-Carat Soul by James McBride
-Anything Is Possible by Elizabeth Strout
-Dying: A Memoir by Cory Taylor
-A Gentleman in Moscow by Amor Towles -Sing, Unburied, Sing by Jesmyn Ward
-Sing, Unburied, Sing by Jesmyn Ward
၂၀၁၇ မှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကတော့- -MiGente by J Balvin& Willy William
-La Dame etSes Valises by Les Amazonesd’Afrique (feat. Nneka)
-Millionaire by Chris Stapleton https://www.youtube.com/watch?v=aR3Y_RKWENo
-Sign of the Times by Harry Styles
-Broken Clocks by SZA
-*Bonus: Born in the U.S.A. by Bruce Springsteen (not out yet, but the blues version in his Broadway show is the best!)
Ref : Obama Facebook Page
Previous Previous post: အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်း မြင့်တက်လာစေရန် ထိရောက်သော နည်းဗျူဟာများ
Next Next post: အကျိုးမလိုလားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
Published: September 9, 20163:27 am Updated: November 22, 20194:53 pm